Uma umuntu enquma ukuqhuba elihlanza yakhe emzimbeni ubuthi ke, okokuqala kunakho konke, kudingeka ufunde indlela ukuhlanza amathumbu ubuthi. Undigested ukudla ukuthi umzimba kukhonjiswa, futhi libhekisela ukususwa kusuka emzimbeni izinto eziyingozi. Slagging kuvimbela kakhulu excretion emathunjini zezinto osekukhulunywe ngakho, kanye ukunqwabelana indle kunomphumela omubi kakhulu ukusebenza umzimba.
Indlela ukuhlanza amathumbu, indlela ukunquma ukuthi kunesidingo salokhu? Eqinisweni, isidingo ukwenza inqubo enjalo ikhona njalo. Iqiniso ukuthi ukuqongelela izinto eziyingozi singenzeka ngokuqhubekayo. Umzimba ngokwayo kusikisela ukuthi sekuyisikhathi ukuhlanza okuvela of ukubuyisa (ukuvuvukala, ukubuyisa). Futhi zibonisa slagging futhi njalo ukusongela kwesisu, ukukhathala, ngisho umkhuhlane futhi radiculitis.
Indlela ukuhlanza amathumbu ngaphandle enemas ekhaya? Okokuqala, ungakwazi uthintane amagilebhisi evamile. Badinga ukudla kanye amathambo. Ngakho, amathumbu bahlanza kahle. Ungakwazi ugaye amajikijolo wavuka okhalweni ngokubamba phezu umusi, ukusebenzisa nedlanzana esiswini esingenalutho ekuseni. Ungadliwa ezibonakala silula, kodwa sibonga nabo ngokucacile ngcono umsebenzi ipheshana wokugaya ukudla ngaphandle kokusebenzisa enemas nemithi ekhethekile.
Indlela ukuhlanza amathumbu usebenzisa isaladi? Lokhu isaladi kumele yakhiwe iklabishi fresh, beet kanye izaqathi. Mangisho ukuthi ngisho beetroot ahlanze isibindi, futhi uma likhona eliningi eyanele, isibonelo, kule isobho, khona-ke umsebenzi emathunjini uwusizo olukhulu.
Kulezi imifino ungenza isaladi:
iklabishi kudingeka uhlakaze;
izaqathe, beet kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi grate;
isaladi eyenziwe okufanayo Ingxenye: iklabishi ukuthatha izingxenye ezintathu, lonke imifino ngakolunye uhlangothi;
Zonke mix kanye inkathi amafutha omnqumo noma sunflower.
Amafutha omnqumo ngokuvamile ewusizo ukuphuza esiswini esingenalutho art nsuku zonke. spoon.
Hlanza amathumbu amakhambi. Khona-ke isicelo enema nge Iziphungo izitshalo zokwelapha. Ikakhulukazi, kungaba decoction of chamomile, sage, calendula. Enema is hhayi Kunconywa ngokuvamile futhi ngokuvamile bewenza lo indlela yokuhlanza. abantu oyiphutha ephoqelela kakhulu ku laxatives. Zingadala Ukuwohloka le mucosa emathunjini, futhi umzimba Ufika wasebenzisa kubo. Nokho kukhona indlela zokuhlanjululwa, ikakhulukazi ngokuhlanganyela yokulamba wezokwelapha.
Indlela ukuhlanza amathumbu ayo zemvelo? isipinashi juice ehlanza esifanayo futhi lonke ipheshana wokugaya ukudla. Awunankinga futhi iklabishi juice, ikakhulukazi abantu ukuhlupheka ukukhuluphala. Kungenzeka ukuba afeze uhlanzekile ngu constricting ngendlela - amanzi anosawoti.
Ekuseni esiswini esingenalutho udinga baphuze enye ingilazi yamanzi anosawoti. Amanzi kufanele lizwakale linemfudumalo. Ngemva kwalokho, ukuvivinya umzimba ezithile. Udinga imizuzu emihlanu ukwenza esifubeni enye bacondze etindzaweni letehlukene (ngakwesokunxele - ngakwesokudla).
Manje esiphuza enye ingilazi yamanzi anosawoti, futhi ngeminithi elilodwa ukwenza ukunyakaza ukujikeleza, zibheke.
Ngemva ukuphuza enye ingilazi yalesi amanzi, kudingeka ahlale kahle phansi futhi aphonse umlenze phezu kwezinye. Manje ukusebenzisa phambili egoba nge dostavaniem iminwe uzwane. Ingabe emihlanu - kasikhombisa.
Awu, ingilazi lokugcina usawoti namanzi afudumele. Ngemva niphuza amanzi nokubeka izinyawo zakhe phezu ezingeni emahlombe, kubalulekile ukwenza Nyakazisa phambili, bezama ukuthola phansi ngezandla zakhe. Le ndlela has Izimo. Akumele kusetshenziswe pathologies ezinzima wokugaya ukudla, ngoba appendicitis okusolwayo.
Sithemba ukuthi lezi amathiphu kuzosiza abafundi siphile ngokuhluzeka amathumbu ahlanzekile, nakho kuyokwenza ukuphila esanelisa ngaphezu kwalokhu nobungqabavu. Ngifisa sengathi ngabe impilo enhle!
Kungani udinga ukuthatha ngesikhathi sokukhulelwa ginipral
Amajaqamba emilenzeni. ukwelashwa
Izidakamizwa "furadonin": izinkomba ukusetshenziswa, side effects kanye Isikali
Amagilebhisi izintokazi iminwe - umholi phakathi izinhlobo yamagilebhisi
Indlela yokuthuthukisa esiphezulu CS: GO: imfundo